Faah-faahin ku saabsan Qaraxyo Ismiidaamin ah oo gaadiid loo adeegsaday oo ka dhacay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qaraxyada ka dhacay meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan Qaraxyadaasi.
Qaraxyada ayaa waxa ay ahaayeen labo gaari oo waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay waxa ayna ka yimaadeen dhanka wadada ka timaada Madiina, ee soo marta Isgoyska Danwadaagta.
Mid ka mid ah gaadiidkaasi ayaa la sheegay inuu soo dhaafay goobta Koontaroolka u aheyd ciidamada Nabad Suggida, wuxuuna ku qarxay gaarigaasi meel ku dhaw Albaabka ciidamada Amisom ee Madina Gate, gaar ahaan meel ku dhaw goob ay degan yihiin Hay’ado UN-ka ka tirsan.
Gaari kale ayaa la sheegay inay rasaaseeyeen ciidamada Nabad Suggida Somaliya, kadibna uu sidaasi ku qarxay, labadan gaari ayaa waxaa kaxeynaayay labo ruux oo naftood haligayaal ah, kuwaasi oo goobta ku geeriyooday.
Waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamo ka tirsan Nabad Suggida Somaliya oo ku sugnaa goobta Koontaroolka ah ee gaariga dambe lagu rasaaseeyay.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Nabad Suggida Somaliya ayaa sheegay in qaraxyada la fashiliyay oo ay gaari waayeen halkii bartilmaameedka u aheyd.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in labada gaari bartilmaameedkooda uu ahaa goob Hay’ado UN-ka ka tirsan ay degan yihiin oo u dhaxeysa wadada Danwadaagta iyo Albaabka Xerada Amisom ee Garoonka Aadan Cadde.
Suxufiyiin ku sugan goobta ay wax ka dhaceen, waxa ay soo sheegayaan inuu Khasaare soo gaaray Askar ka tirsan ciidamada Amisom oo halkaa ku sugnaa xilliga qaraxa uu dhacaayay.
Saraakiisha Nabad Suggida Somaliya waxa ay sheegayaan inay bixin doonan faah-faahinta la xiriirta qaraxyada, marka uu soo dhamaado baaritaanka hada socda.
Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha Qaraxyadii nawaaxiga Garoonka Diyaaradaha (Sawirro)